Johnny Depp, 'Fantastic Beasts and Where to Find Them 3' မှ နုတ်ထွက် - 빵야뉴스
승인 2020.11.11 20:23
[BBANGYA NEWS | Reporter Nang] အမေရိကန်ဟောလိဝုဒ်မင်းသား Johnny Depp (၅၇ နှစ်) သည် ဇနီးဖြစ်သူ Amber Heard ကို ရိုက်နှက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုကြောင့် 'Fantastic Beasts and Where to Find Them 3' ရုပ်ရှင်၏ တတိယစီးရီးမှ နုတ်ထွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Johnny Depp က ၆ ရက်(လက်ရှိအချိန်) Instagram မှတဆင့် "Warner Bros၏ 'Fantastic Beasts and Where to Find Them 3'တွင် Grindelwald wizard နေရာတွင် သရုပ်ဆောင်ရန် ကမ်းလှမ်းမှုကို လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး လေးလေးစားစား အဲ့လိုလုပ်ပါမယ်" လို့ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
Johnny Depp သည် လွန်ခဲ့သော ၂၀၁၈ခုနှစ် 'Johnny Depp သည်ဇနီးဟောင်း Amber Heard ကို ရိုက်နှက်ခဲ့သည်'ဟု ဗြိတိန်မီဒီယာ The Sun အား အသရေဖျက်မှု တင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဗြိတိသျှတရားရုံးက Hurd ၏ပြောဆိုချက်အချို့ကို ၁၄ ကြိမ် ရိုက်နှက်ခဲ့ခြင်းကို ဝန်ခံခဲ့ပြီး ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး Johnny Depp၏ အနာဂတ်လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
조니 뎁은 하차 사실을 밝힌 뒤 "영국 정부의 비현실적인 판결이 진실을 말하기 위한 내 싸움에 변화를 주지는 않을 것이라는 것을 전하고 싶다. 나는 항소를 확정했다" 며 "내 결심은 여전히 확고하다. 내게 씌워진 혐의가 거짓이라는 것을 증명할 것이다. 내 인생과 경력은 지금 정의되지 않을 것" 이라며 주장했다.
Johnny Deppသည် "ဗြိတိသျှအစိုးရရဲ့ လက်တွေ့မကျတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်က အမှန်တရားကို ပြောတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ အယူခံဝင်မှုကို အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်က အခုထိ ခိုင်မြဲပါတယ်။ ငါ့အမှားလို့စွပ်စွဲခြင်းကို သက်သေပြနိုင်လိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့် ဘဝကို ဆုံးဖြတ်မှာ မဟုတ်ပါ။" လို့ ဆိုခဲ့သည်။
Warner Brosသည် ယနေ့ Johnny Depp သည် နုတ်ထွက်သွားကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီး Grindelwald wizard ၏ သရုပ်ဆောင်နေရာအတွက် သရုပ်ဆောင်အသစ်ကို ရွေးမည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။